Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dhibaatada Ku Haysa Dawooyinka Caloosha Ku Saara
1. Waa maxay Linaclotide (Linzess)?
2. Maxaa loo isticmaalaa Linaclotide?
3. Waa maxay farsamada waxqabadka ee Linaclotide?
4. Sidee ayaa loo isticmaali karaa Linaclotide?
5. Waa maxay qiyaasta loogu tala galay Linaclotide (Linzess)?
6. Dhibaatooyin noocee ah ayay Linaclotide keeni kartaa?
7. Daawooyinkee ama kaabis ah ayaa la falgali doona Linaclotide?
8. Waa maxay farqiyada u dhexeeya Linaclotide iyo lubiprostone?
9. Macluumaad kale oo ku saabsan Linaclotide ayaan ogaanayaa?
Linaclotide (Linzess) waa dawo afka laga aqoonsan yahay oo FDA-du ay si caadi ah u adeegsato bukaanleyda qaangaarka ah ee la kulma caloosha oo adkaata ama calool xanuun sabab u ah xanuun calool xanuun. Linaclotide 851199-59-2 waxay ku timid meesha ugu sarreysa liiska liiska daroogada cusub ee loo yaqaan guonylate cyclase-C agonists.
Magaca astaanta caanka ah ee loo yaqaan "Linaclotide" waa Linzess waana muhiim in maskaxda lagu hayo in xilligan la joogo aysan jirin nooc nooc nooc ah oo nooca loo yaqaan 'Linaclotide'. Marka, haddii aad raadineysid iibinta Linaclotide ama adeeg shakhsi ahaaneed, iska ilaali iibiyayaasha daroogada ee internetka ka ganacsada oo laga yaabo inay iibinayaan sharci darro. Waxyaabaha guud ee loo yaqaan 'Linaclotide generic' daroogada.
Linzess waa iskuxirka guanylate cyclase-C agonist iyo XptX-amino acid peptide. Waa magaca kiimikada waa L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- L-cysteinyl-L-tyrosine, cyclic (14-1), (6-2), (10-5) -tris (burburin).
Qaacidadeeda molikalka ah waa C59H79N15O21S6 halka miisaanka molikalku yahay 1526.
Budada Linaclotide waa cadaan ilaa caddaan oo waxoogaa biyo ah ayaa lagu milmaa. Waxay sidoo kale ku milmi kartaa wax yar oo ah astaous chloride sodium chloride (0.9%).
Finalka Linzess waxay ku jirtaa qaab kaabsooli ah gelatin adag oo ay ku jiraan koollo maaddada laysku qurxiyo ah. Calcium chloride duhydrate, L-leucine, titanium dioxide, microcrystalline cellulose, gelatin, iyo hypromellose waxay ka mid yihiin waxyaabaha firfircoon ee ku jira Linzess
Markay tahay isticmaalka Linaclotide, dadku waxay u isticmaalaan sidii loogu daaweyn lahaa arrimaha caloosha gaar ah sida xanaaqa xanaaqa oo lagu garto calool fadhiga iyo calool fadhiga oo adkaada.
Linaclotide loogu talagalay Irritable Bowel Syndrome calaamadaha
Calaamadaha cudurka mindhicirka (IBS) waa cilad daba dheeraatay oo ka hortagaysa in xiidmuhu si caadi ah u shaqeeyaan. Tilmaantan Linaclotide waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xiidanka murqaha iyo mararka qaarkood cudur mindhicirka oo shaqeynaya. Astaamaha ugu waaweyn ee cudurka waa calool fadhiga, shuban iyo calool xanuun calool fadhiga ama shuban.
Daraasad caafimaad oo lagu ogaanayo waxtarka Linaclotide ee loogu talagalay kahortagga calaamadaha caloosha oo xanaaq badan, bukaannada qaangaarka ah ayaa loo adeegsaday laba tijaabo oo kala-guur ah, oo ah noocyo badan. Tijaabada koowaad waxay ku lug laheyd bukaanka 800 oo loo saaray 290 mcg maalin kasta koorsada daaweynta linzess halka 804 loo qoondeeyay kan labaad kaas oo ku jiray placebo.
Dhammaan bukaannada loo isticmaalay labada koox waxay la kulmeen shuruudaha IBS Rome II waxaana la rajeynayay inay gaaraan dhibic micnaheedu ah xanuunka caloosha ee 3 ugu yaraan qiyaasta eber illaa toban iyo ugu yaraan saddex dhaqdhaqaaq mindhicil laf-dhab ah oo toddobaad kasta ah muddada daaweynta. muddo.
Dhamaadka muddada daaweynta, bukaannadii ku qaatay koorsada daaweynta linzess waxay la kulmeen astaamo BIS oo ka sii fiican marka loo eego kuwa dhiggooda ah marka loo eego:
Mindhicirka dhaqdhaqaaqa mindhicirka isdaba-joogga ah
Xaddiga waqtiga iyo dadaal jirka ah oo qofku isticmaalo inuu ku gudbo saxarada.
Xanuun joojinta caloosha
Taasi runtii waxay xaqiijisay Linaclotide inay tahay daaweyn wax ku ool ah BIS.
Linaclotide loogu talagalay Calaamadaha Idiopathic Caloosha oo muddo dheer ah (CIC)
Daraasad lagu qiimeynayo waxtarka Linzess ee CIC calaamadaha maareynta, bukaanada qaangaarka ah ee calool fadhiga oo adkaada waxaa lagu meeleeyay si aan kala sooc lahayn, tijaabooyin xarumo caafimaad, oo lamid ah daraasadda kor lagu sharaxay BIS.
Mid kasta oo ka mid ah bukaannada ayaa la kulmay habka loo beddelay qaab-dhismeedka caloosha ee Rome II oo wax laga beddelay waxayna heleen 72mg, 145 mcg Linzess, 290 mcg Linzess ama daaweynta placebo maalin kasta inta lagu jiro muddada daaweynta 12-toddobaad.
Dhamaadka muddada daweynta, cilmi-baarayaashu waxay arkeen horumar sii kordheysa oo ah calaamadaha CIC ee bukaannada ku jiray daaweynta Linzess marka la barbardhigo kuwa ku jira placebo. Gaar ahaan, waxay la kulmeen horumar heer sare ah marka loo eego soo noqnoqda saxarada, joogsanaanta saxarada iyo xaddiga culeyska saxarada.
Dhamaan saddexda qiyaasood ee Linzess, waxay leeyihiin waxyeelo aan yareyn oo ay weheliso soo bandhigida astaamaha CIC ee muhiimka ah. Tani waxay cadeyneysaa muujinta Linaclotide ee awooda ay u leedahay daaweynta CIC.
Si ka duwan daawooyinka qaar ee loo isticmaalo daaweynta arrimaha kor ku xusan, Qaabka loo yaqaan 'Linaclotide habka' wuu ka duwan yahay jirkaaga. Aaladda Linaclotide waxay ku dhacdaa si gaar ah xiidmahaaga iyadoo la kordhinayo dheecaanka, sidaas awgeedna loo hagaajiyo dhaqdhaqaaqa mindhicirka iyo yareynta xanuunka ka imaan kara dhibaatada caloosha.
Linaclotide (Linzess) waxay ka dhigeysaa xiidmaha inay soo saaraan dheecaan badan iyagoo kordhinaya wax soo saarka cyclic guanosine monophosphate.
Marka Linaclotide ay isticmaasho awoodeeda si ay u kordhiso dareeraha xiidmahaaga, cunnadu si dhakhso leh ayey ugu gudubtaa mindhicirka oo saxaradu soo fiicnaato. Tani waxay hagaajineysaa calaamadaha calaamadaha dhaqdhaqaaqa mindhicirka sida dhiig karka, calool xanuun / calool xanuun iyo dareemeyn dhaqdhaqaaq saxarada oo aan dhameystirneyn.
Markaad samaysato a Iibso Linaclotide, dabcan iyada oo loo qoro warqad dhakhtar, waxaa muhiim ah in la hubiyo in aad aqriso tilmaamaha daawada ee uu ku siin doono farmashiistaha ka hor intaadan qaadan daawada. Tilmaamuhu wuxuu kuu sheegi doonaa qiyaasta habboon ee loo yaqaan "Liaclotide", adiga ku habboon qaadashada qiyaasta daawada iyo muddada tababarka lagu taliyey.
Haddii ay dhacdo inaad u baahatid wax caddeyn ah oo dhan ah Qiyaasta daawada loo yaqaan "Liaclotide", ha ka labalabeyn inaad la xiriirto dhakhtarkaaga ama farmashiistaha si aad uga fogaato dhibaatooyinka soo raaca Linaclotide ama is-dhexgalka Linaclotide.
Ahaanshaha dawo afka ah, Linaclotide waa in afka laga qaato. Waa inaad qaadataa inta caloosha madhan tahay, gaar ahaan daqiiqadaha 30 kahor intaadan cunin cuntadaada ugu horreysa maalin. Dawada ugu dambeysa ee loo yaqaan 'Linaclotide' waxay kujirtaa qaab kaabsal oo waa in la wada liqo. Waa inaadan jabin ama calalin kaabsoosha Linaclotide.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo inaad isku dayday inaad liqdo kaabsooshaha laakiin si aan micno lahayn, waad furi kartaa oo waxaad ku dhex qarin kartaa waxyaabaha ku jira tufaaxa tufaaxa leh. Markaa isla markiiba liq kiniinada isla markaana sida ay tahay - ha u calalin. Isku qas kaliya qadarka lagaa rabo inaad qaadato waqtigaas gaarka ah sababta oo ah kaydinta daawada ayaa kadhigi doonta daroogada.
Haddii aadan lahayn applesauce, waxaad u isticmaali kartaa biyo kale. Cabbir hal wiqiyad ama 30mm oo biyo ah, furo kaabsoosha xaddiga ah ee loo yaqaan 'Liaclotide' kaabuuji oo ku faaruq waxa ku jira biyaha. Ku wareeji biyaha- Linaclotide waxyaabaha ku jira qiyaastii 20 sekan kadibna cab isla markiiba. Si la mid ah sida tufaaxa tufaaxa leh, ha calalin waxyaabaha ku jira dhammaantiis.
Haddii ay dhacdo in daawada loogu tala galay in lagu maareeyo tuubada nasogastric ama tuubada caloosha, ka raadso talo ku saabsan maamulka farmasiiga ama dhakhtarkaaga. Si kastaba ha noqotee, halkan waa nidaamka guud ee maareynta tubbada.
Cabir 30 ml oo biyo nadiif ah iyo heerkul qolka oo ku rid weel nadiif ah.
Fur daboolka Linaclotide ka dibna ku wada buuxi dhammaan waxyaabaha (kuus ah) biyo
Dhex-dhexaad biyaha iyo gogosha 'Linaclotide' adoo si tartiib ah u riixyo isku dardaaga wax aan ka yarayn ilbiriqsiyo 20.
Ku soo dhex jiido weelka biyaha ka samaysan ee loo yaqaan 'Liaclotide' weelka biyaha ah irbad saliid leh oo leh caarada u eg kan kateetarka iyo cabbirka saxda ah. Ka dib isku darista isku dar tuubada nasogastric ama tuubada caloosha ee uu adeegsado bukaanka adoo adeegsanaya cadaadis joogto ah laakiin ku dhowaad ah 10 mL / 10 ilbiriqsiyo siringaha.
Haddii ay jiraan wax kuul ah Liaclotide oo ku haray weelka, ku dar 30ml oo biyo nadiif ah, ku wareeji iskudhafka, oo u maaree sida horay loo sharaxay.
Mar haddii lagaa dhammeeyo maaraynta isku dhafka ah ee kuuliyada iyo biyaha, isticmaal ugu yaraan 10 ml oo biyo ah si aad u shiddo tuubada maamulka.
Qiyaasta ku habboon ee loo yaqaan 'Liaclotide' wuxuu ku kala duwanaan karaa qof ilaa qof kale, iyadoo kuxiran xaaladda loo qorsheeyay in lagu daaweeyo iyo sidoo kale jawaabta qofka ka qaato daawada. Mar labaad, waxaa muhiim ah in la xuso in dawada aysan isticmaalin dadka aan gaarin da'da 18 sano.
Caruurta yar yari waxay halis ugu jiraan inay la kulmaan halis Dhibaatooyinka waxyeellada leh ee loo yaqaan 'Linaclotide' waa inay isticmaalaan daroogada.
(1) Qiyaasta Dadka Waaweyn ee Loogu Tala Galay Calaamadaha Xanuunka Sifeeya
Qofka weyn ee la ildaran xanuunka 'Irritable Bowel Syndrome' oo ay weheliso calool fadhiga, isaga ama iyadu waa inay qaataan qiyaas ah Linaclotide oo ah 290 mcg maalin kasta. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, daawada waa in lagu qaadaa calool madhan. Si loo hubiyo taasi, qaado kahor cuntadaada ugu horreysa maalin.
(2) Qiyaasta Dadka Waaweyn ee Caloosha oo Caloosha ah
Sida laga soo xigtay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka, qiyaasta lagu talinayo qiyaasta Linaclotide ee loogu talagalay dadka qaangaarka ah ee qaba calool fadhiga idongathic (CIC) waa 72 mcg.
Si kastaba ha noqotee, qiyaasta 145 mcg ayaa sidoo kale lagula talin karaa bukaanka qaangaarka ah ee CIC, taas oo kuxiran soo bandhigiddiisa / dulqaadashadeeda. Waad iska bixi kartaa linzess 72 mcg faallooyinka si aad fikrad uga hesho sida ay qiyaasta dawadu u shaqeyso iyo isticmaaleyaashii ka faa'iidaystay.
Sida laga soo xigtay dib-u-eegista kala duwan ee '72 mcg, oo ka mid ah ra'yi-celinta kale ee ku saabsan dawada, bukaanka qaba qodobbada caafimaadka ee kor lagu soo xusay oo rajeynaya inuu ka faa'iideysto kartideeda waa inuu si joogto ah u adeegsadaa si loo gaaro natiijooyinka la doonayo. Ka sokow, waa in la qaato isku wakhti maalin kasta muddada koorsada daawada loo qoro.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Linzess ay u badan tahay inay sababto is-dhexgalka Linaclotide ee daroogada kala duwan. Sidaas oo kale, waxaad u baahan tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga wixii ku saabsan dawooyinka aad wakhtigan xaadirka ah qaadatid ka hor intaadan bilaabin isticmaalkeeda (Linaclotide).
Sidoo kale, haweenka uurka leh waa inay taxaddar weyn muujiyaan markay ka fiirsanayaan qaadashada Linaclotide maxaa yeelay daroogada ayaa khatar weyn u leh uurjiifka. Waa inay raadsadaan dareenka dhakhtarka si ay u xaqiijiyaan amaankooda iyo tan ilmahooda aan dhalan haddii ay qaataan dawada. Isla kiiskan ayaa quseeya hooyooyinka nuujinaya iyo kuwa aad ugu talagashay inaad uur yeelato inta aad isticmaaleysid daawada.
Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii ay qabaan CIC ama Irritable Bowel Syndrome, bukaannada kayar da'da da'da 6 ma aha inay qaataan Budada Linzess (851199-59-2). Baadhitaanno caafimaad ayaa lagu arkay in dawadu sababtay geerida jiirka dhallaanka ah oo da 'ahaan u dhigma kana hooseeya sannadihii 6 ee aadanaha.
Sidaas oo kale, dawada waxaa loo gudbiyaa bukaannada aan gaarin da'da maadaama ay u gelineysaa halis aad u sarreysa oo ah inuu ku dhaco shuban iyo waxyeelada ay yeelan karto.
Ka sokow, waxaa jira xog caafimaad oo muujineysa badbaadada iyo hufnaanta isku xirnaanta ee bukaannada da`doodu u dhaxayso 6 sano illaa sannadaha 17. Sidaas oo kale, haddii ay dhacdo ilmo ama dhallinyar da 'ka hooseeya sannadihii 18 ee u baahan ka-bogsashada ICI ama BIS, waa in talobixinta dhakhtarku marka hore la raadsado.
Waxaad qaadan kartaa ugu badnaan laba toddobaad ka hor intaadan la kulmin astaamo calaamadaha daroogada awgeed. Marka, waxoogaa yar dulqaad leh. Sii wad u isticmaal sidii lagu faray.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay calaamaddaadu hagaagto ama ka sii darto xitaa ka dib markaad isticmaasho linzess, ha qaadan qaddarka ka sarreeya xaddiga laguu qoray. Waa in aadan taasi taas ku dhaqaaqin. Taabadalkeed, u sheeg dhakhtarkaaga si uu u ogaado sababta ka dambeysa inuu waxtarkiisu noqon karo dawooyinka iyo talo ku saabsan tallaabada xigta ee tallaabada.
Waxaa lagu talinayaa inaad ka fogaato isticmaalka Linaclotide haddii aad xasaasiyad ku qabtid ama xiidmahaagu ay xannibaan.
Haddii aad seegto qiyaasta daawada loo yaqaan 'Liaclotide', ha isku deyin inaad ka kabto qiyaasta aad lumisay. Ha iloowin oo sii wad qaadashada qiyaasta xigta si adag waqtiga loogu talagalay.
Haddii ay dhacdo inaad adiga ama qofka aad jeceshahay qaadatid xaddi xad dhaaf ah oo ah Linaclotide (xaddi xad dhaaf ah), dhacdada waa in dhaqso loo soo ogeysiiyo dhaqtarka. Bedel ahaan, waxaad la xiriiri kartaa Adeegyada Caawinta Sunta adoo garaacaya 1-800-222-1222.
Sida laga soo xigtay kala duwan Dib u eegista Linaclotide iyo daraasadaha cilmiga ah, kuwa soo socda ayaa ah dhibaatooyinka caam ah ee loo yaqaan Linaclotide side effects:
Xanuun caloosha oo fudud ama xanuun
Calaamadaha qabow sida sanka oo cufan / duuf ah, cune xanuun xanuun leh sanka ama hindhisada
sanka oo cufan ama duufsan
dhiig baxa malawadka
In kasta oo ay dhif tahay, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa mid ka mid ah dhibaatooyinka soo socda ee Linaclotide:
Shuban daran ama joogto ah
Shuban (shuban) oo ay weheliso dawakhaad ama dareen dareento inaad dareento inaad u eg tahay inaad gudubtid
Dareenka aan degganeyn
Jahwareer aan caadi ahayn
Qalbiyad aan joogto ahayn
Harraad iyo haraad joogto ah
Xanuun caloosha oo daran
madow, dhiig leh, ama saxarada dhiiga
wajiga, bushimaha, carabka, ama hunguriga barar
Waxaad u baahan tahay inaad raadsato gargaar deg deg ah haddii aad la kulanto barar qaybaha aan soo sheegnay, dhibaato xagga neefsashada ah ama furuuruc.
Haddii ay dhacdo dhibaatooyinka kale ee dhifka ah ee Linaclotide, waa inaad joojiso isticmaalka daroogada oo aad isla markiiba takhtarkaaga kala xiriirtaa tilmaan dheeraad ah.
Is-dhexgalka Linaclotide waxaa laga yaabaa inay dhacdo haddii Linaclotide loo adeegsado dawooyin kale oo ay ka mid yihiin kuwa biilka ka badan, waxyaabaha fitamiinnada laga helo, waxyaabaha geedaha laga bixiyo iyo dawooyinka loo qoro. Daawooyinka qaarkood ee la sheegay inay sababi karaan is-dhexgalka Linaclotide waxaa ka mid ah:
Awoodda Aspirin Hoose
Dulcolax (is dhexgalka yar)
Metamucil (is dhexgalka yar)
Levothyroxine (is dhexgalka dhexdhexaadka ah)
Metoprolol Guusha ER
8. Maxay ku kala duwan yihiins inta u dhaxaysa Linaclotide iyo lubiprostone?
Labada Linaclotide iyo lubiprostone waa dawooyinka ay DFA ansixisay oo ku saabsan calool-fadhiga awgood ee adkaada iyo xanaaqa xanaaqa ee dadka waaweyn. Haddii aad rabto inaad kordhiso dhaqdhaqaaqa mindhicirka, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah labada.
Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin kala duwanaansho dhowr ah marka loo eego:
Lubiprostone waxay ka tirsan tahay daroogada loo yaqaan 'firfircoonida kloride channel. Dhanka kale, Linaclotide (Linzess) waxay xubin ka tahay dabaqadda daroogada ee loo yaqaan guanylate cyclase-C agonists.
(2)Qiyaasta maalinlaha ah
In kasta oo lagu taliyey qiyaasta daawada loo yaqaan ”Liaclotide” waa in la qaataa hal mar maalintii, gaar ahaan quraacda ka hor, Lubiprostone waxaa badanaa la qaataa laba jeer maalintii. Sidaa darteed, haddii aad dhib ku qabtid xusuusinta qaadashada daawooyinkaaga maalin kasta, Linaclotide waxay kuu noqon doontaa ikhtiyaar aad kuugu habboon.
Waxa kale oo labada u kala saaraa marka loo eego qaddarka waa qadarka qofku u qaadan lahaa hal mar. Tusaale ahaan, CIC, qiyaasta lagu taliyey ee dawada Linaclotide waa 72 mcg halka mida Lubiprostone ay tahay 8 mcg.
Kala duwanaansho kale budada Linaclotide (851199-59-2) iyo lubiprostone waa sharuudaha is-dhexgalka daroogada. Qiyaastii daawooyinka '58' ee loo yaqaan 'is dhexgalka' Linaclotide, is-dhexgalka Linaclotide ayaa aad uga badan marka loo barbar dhigo lubiprostone oo lala xiriirinayo kaliya hal isdhaxgalka daroogada.
Linzess waxaa la ansixiyay 30th August 2012 halka ansixinta lubiprostone ay dhacday Janaayo 31, 2006
Markaad caloosha ku haysato cunto oo aad qaadato Lakaclotide, calaamadaha calooshaada sida shuban, calool xanuun iyo gaas ayaa laga yaabaa inay ka sii daraan, mahadsanid is-dhexgalka cunnada. Haddii ay kugu dhacdo shuban aad u daran oo aad qaadaneyso dawo kale oo afka ah, nuugista aakhirka ayaa laga yaabaa in si xun loo farageliyo.
Si loo yareeyo dulqaadashada caloosha iyo caloosha ka dhalata awgeed, Linaclotide waxaa loo qaadanayaa calool madhan.
Dhanka kale, waxaa jira dhacdo saynis ah oo la xaqiijiyay oo ku saabsan is-dhexgalka cunnada ee Lubiprostone. Si kastaba ha noqotee, kani maahan in meesha laga saaro is-dhexgal suurtagal ah. Sidaasoo kale, waxaa muhiim ah in la raadiyo caddeyn dheeraad ah waqtiga ugu habboon ee loo isticmaalo dawada takhtarkaaga
(6)Khatarta uur ku jirta ee hooyooyinka uurka leh
Ilaa hadda, qayb ka mid ah baaritaannada la xiriira iyo dib u eegista Linaclotide ayaa muujinaya in Lubiprostone ay u badan tahay inay waxyeelo ku keento uurjiifka haddii hooyada uurka lihi ay qaadato daawada. Dhanka kale, ma jiro daraasad keli ah oo muujineysa in Linzess ay sababi karto waxyeelo uurjiif ah haddii ay ku dhacdo haweeney rajo qabta.
Saynisyahanada ayaa u sabab ah nabdoonaankan la isla qaatay in uu hooseeyo maqnaanshaha nidaamka dawada. Si kastaba ha noqotee, halista si buuxda looma sheegi karo maaddaama baaritaanno dheeri ah lagu socdo si loo hubiyo nabadgelyada ama halista daroogada ilmaha aan weli dhalan.
Sidaa darteed, haddii ay doonayso inay qaadato Lubiprostone ama Linaclotide, hooyo uur leh waa inay kala tashataa dhakhtar ku saabsan ku habboonaanta go'aanka.
Ka sokow CIC, lubiprostone wuxuu awoodaa b
e loo istcimaalo daaweynta loo yaqaan 'Opioid-inippleted constipation (OIC)' iyo sidoo kale Irritable mindhicirka xanuunka qaba calool-fadhiga dumarka ugu yaraan da'da 18 sano jir ah.
Markay tahay cilladaha loo yaqaan 'Linaclotide, marka laga reebo CIC, waxay sidoo kale daweysaa xanaaqa xanaaqa oo ay weheliso caloosha (IBS-C) haweenka iyo ragga. Looma adeegsan karo daaweynta OIC.
Marka ay timaado in Qiimaha Linaclotide, waxyar ayuu ka sarreeyaa kan lubiprostone. Waqtigan xaadirka ah, qiimaha Linaclotide waa qiyaastii $ 450 oo loogu talagalay kaabsooshaha 30 halka 60 kaabsooshaha lubiprostone laga yaabo inay ku kacdo qiyaastii $ 396. Si kastaba ha noqotee, qiimayaashu way ku kala duwan yihiin kan iibiya mid kale iyo waqti ilaa waqti.
Soo-saare Linaclotide waa shirkad loo yaqaan Allergan halka lubiprostone ay soo saarto shirkadda Sucampo.
In kasta oo ay jiraan kala duwanaanta korka ku xusan, waxaa muhiim ah in la ogaado in lubiprostone iyo Linaclotide laga iibiyo macaamiisha qaab kaabsal ah oo afka ah mana laha hidde-side. Sidoo kale, labada daawo waxay u baahan yihiin warqad dhakhtar si loogu helo mid ka mid iibiyaha.
9. Waa maxay macluumaad kale ku saabsan Linaclotide ma inaan ogaadaa?
Sida dawooyinka kale oo dhan, budada Linaclotide (851199-59-2) ama kaabsoosha waa in lagu keydiyaa meel carruurtu gaarto si looga ilaaliyo inay ku xadgudbaan. Sidookale, ahaansha daawo qorida, dadka qaarkiis waxaa lagayaabaa inay kufureen inay la wadaagaan daawada dadka kale si looga fogaado dhibaatada tagitaanka dhaqtar si loo qoro.
Si kastaba ha noqotee, wadaagista Linaclotide waa mid khatar ah maxaa yeelay dhakhtar waa inuu tixgeliyaa arrimo badan tixgelintiisa ka hor intaadan qorin daawada iyo ka-tallaabada tallaabada waxay u horseedi kartaa saameyn xun.
Haddii aad dooneysid inaad sameysid wax lagu yiraahdo Linaclotide, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in dalal badan, oo ay kujiraan Mareykanka, inaad u baahan tahay warqad dhakhtar si aad u hesho daawada. Tani waa iyadoo aan loo eegin haddii aad rabto inaad ka iibsato internetka ama miiska soo-iibsiga.
Markay tahay kaydinta, heerkulka kaydinta ee lagula taliyay Linaclotide 851199-59-2 waa 25 ° C (77 ° F). Haddii aad la macaamilayso budada 'Linaclotide' ama kaabsoosha, dawada waa in lagu kaydiyaa meel qoyan oo aan qoyaan lahayn, lagumana qaybin karo ama dib loo warshadayn. Taabadalkeed, ku hay daawada oo dhan weelkeedii asalka ahaa.
Sidookale, hubi in weelka si adag ugu xidhan yahay meeshuu ku yaal gudaha si loo ilaaliyo qoyaan.
Haddii aad rabto inaad iibsato Linaclotide 851199-59-2 isticmaalka warshadaha, Linaclotide iibinta ama adeegsiyada kale ee Linaclotide, hubi inaad ka hesho ilo sumcad leh oo lagu kalsoonaan karo. Dib-u-eegista Linaclotide ee tooska ah waxay kugu hagi kartaa iibiyaha wanaagsan.
Haddii kale, adigoon sameynin dadaalkii saxda ahaa, iibiyaha internetka ama iibiyaha qadka ka sheeganaya inuu leeyahay run Iibinta Linaclotide waxaa laga yaabaa inuu noqdo iibinta alaabooyinka ganacsiga ka ganacsada ama xada lacagtaada shaqo adag.
Andresen, V., Camilleri, M., Busciglio, IA, Grudell, A., Burton, D., McKinzie, S.,… & Currie, MG (2007). Saamaynta maalmaha 5 linaclotide ee socodka transit-ka iyo shaqada caloosha ee dumarka qaba calool-xanuun badan ee xanaaqa. Gastroenterology, 133(3), 761-768.
Chey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG,… & Baird, MJ (2012). Linaclotide ee caloosha oo xanaaq badan oo calool istaaga: a 26-asbuuc, kala-sooc lahayn, laba-indhoole ah, tijaabin xakamaynta placebo si loo qiimeeyo waxtarka iyo nabadgelyada. Joornaalka Mareykanka ee caloosha iyo galmada, 107(11), 1702.
Cuppoletti, J., Blikslager, AT, Chakrabarti, J., Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012). Saameynta isbadelka ah ee linaclotide iyo lubiprostone ee ku saabsan dib u soo celinta guryaha xayiraadda unugyada unugyada unugyada unugyada hoormoonka unugyada celceliska ka dib soo-gaadhista walaacyada unugga. Dawooyinka BMC, 12(1), 3.
Johnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE,… & Currie, MG (2009). Daraasad tijaabo ah oo ku saabsan saamaynta linfalotide ee bukaannada qaba calool fadhiga. Joornaalka Mareykanka ee caloosha iyo galmada, 104(1), 125.
Lembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA,… & Johnston, JM (2010). Waxtarka linaclotide ee bukaannada qaba calool fadhiga Gastroenterology, 138(3), 886-895.
Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD,… & Jeglinski, BI (2011). Laba tijaabo oo aan kala sooc lahayn oo loo yaqaan 'linaclotide' oo ku saabsan calool fadhiga. New England Journal of Medicine, 365(6), 527-536.
Liraglutide: Dawada Wanaagsan ee Lagu Daweeyo Sonkorowga Mellitus Nooca 2 iyo Cayil